Ixesha kunye nabahlobo 47
Ingaba umntu uyingcosana ye-macrocosm, indalo yonke into encinane? Ukuba kunjalo, iiplanethi kunye neenkwenkwezi ezibonakalayo kufuneka zimelwe ngaphakathi kuye. Bahlala phi?
Bacinga ngamaxesha ahlukeneyo kunye nangeendlela ezahlukeneyo, bathi indalo yafakelwa emntwini. Njengomzekeliso okanye enyanisweni, oku kunokuba yinyani. Ayithethi ukuba indalo yonke ineminwe kunye iinzwane kwaye inxibe amashiya kunye neenwele entloko, nokuba indalo ayakhiwa ngokwamanqanaba akhoyo omzimba womntu, kodwa oko kuthetha ukuba imisebenzi yendalo iphela inokuthi ibonakaliswe kwaye ibonakaliswe emntwini ngamalungu akhe kunye namalungu. Amalungu emzimbeni womntu awenzelwanga ukugcwalisa indawo, kodwa ukwenza imisebenzi ethile kuqoqosho ngokubanzi nakwintlalontle yento yonke xa iyonke. Kunokutshiwo okufanayo nakwimizimba ekule firmament.
Imisebe yokukhanya ebengezelayo kunye ne-orbs ebengezelayo emazulwini yimithombo yeendaba ngamajelo eendaba asebenza kuwo wonke umzimba wendawo, ngokomthetho wendalo iphela kunye nentlalo-ntle ngokubanzi kunye noqoqosho luphela. Amalungu angaphakathi, afana namalungu esini, izintso, umqolo, ipancreas, isibindi, intliziyo nemiphunga, kuthiwa yimbalelwano kunye nokuthwala ngqo ulwalamano kunye neeplanethi ezisixhenxe. Inzululwazi ezinje kunye neemfihlakalo ezinjengeBoehme, Paracelsus, Von Helmont, Swedenborg, izithandi zobulumko zomlilo kunye noochwephesha, baye babiza amagama amalungu eplanethi kunye neeplanethi ezingqinelana. Zonke azinikezeli ngembalelwano efanayo, kodwa ziyavuma ukuba kukho isenzo sokubuyisa kunye nolwalamano phakathi kwamalungu neeplanethi. Emva kokwazi ukuba kukho imbalelwano, umfundi kufuneka, ukuba unqwenela ukwazi, acinge kwaye asombulule ukuba leliphi na ilungu elihambelana neeplanethi ezithile, kwaye zihambelana njani kwaye zisebenza njani. Akanakho ukuxhomekeka kwiitafile zomnye kule nto. Itafile yembalelwano inokuba ilungile kulowo uyenzileyo; isenokungabi njalo kwenye. Umfundi kufuneka afumane imbalelwano yakhe.
Ngaphandle kokucinga, akukho mntu uya kuze azi ukuba izinto zelizwe zihambelana kwaye zinxibelelana njani namalungu athile omzimba, nokuba abanye bathini ngazo. Ukucinga kufuneka kuqhubeke de umxholo waziwe. Yintoni engqinelana nemilozi, amaqela ahamba ngeenkwenkwezi, i-nebulae esikhaleni, enza izinto emzimbeni womntu njenge-plexuses, i-nerve ganglia, i-nerve enqamlezayo. Ezi ntlobo okanye iminqamlezo emzimbeni zikhupha ukukhanya, aura nerve. Oku emazulwini kuthethwe njengokukhanya kweenkwenkwezi, nangamanye amagama. Oku kungabonakala kukude kwaye kuthandeka kwisazi seenkwenkwezi, kodwa ukuba ucinga emzimbeni wakhe ade afumane ubume bamaziko emithambo kunye nemijelo yawo, uya kuyitshintsha imbono yakhe malunga nesayensi yeenkwenkwezi. Wayeza kuzazi ukuba ziyintoni na iinkwenkwezi ezisemazulwini, kwaye akwazi ukuzibeka njengamaziko emzimbeni wakhe.
Kuthetha ntoni ngempilo ngokubanzi? Ukuba ngaba ngumlinganiso wamandla omzimba, engqondweni nangokomoya, ngoko-ke ukulinganiswa kwimivuzo?
Impilo kukuphila ngokupheleleyo kunye nokuqina komzimba ekwakhiweni nasekusebenzeni kwawo. Impilo ngokubanzi kukusebenza komzimba emsebenzini owenzelwe wona, ngaphandle kokuthinteleka ekusebenzeni kwawo okanye ukonakala kwamalungu awo. Amandla ayaphuhliswa kwaye agcinwa njengesiphumo sempilo. Ukomelela akuyona into ngaphandle kwempilo, okanye ukuzimela kwezempilo. Impilo igcinwa ngokulondolozwa kwamandla okanye amandla aphuhlisiweyo, kunye nesenzo sokubuyisela phakathi kwamalungu omzimba kunye nomzimba uphela. Oku kusebenza kwingqondo nakwimo yokomoya yomntu, ngokudibana nomzimba wakhe ongumntu, nakwinyama yezilwanyana eqhelekileyo. Kukho impilo ngokwengqondo nangokomoya njengoko kukho impilo yasemzimbeni. Impilo yalo lonke igcinwa xa icandelo ngalinye lokudityaniswa lenza umsebenzi walo ngokunxulumene kunye nokulunga liphela. Umthetho uqondakala ngokulula kodwa kunzima ukulandela. Impilo ifunyanwa kwaye igcinwe kwinqanaba lokuba umntu enze eyona nto ayaziyo ukuba ayifumane, kwaye esenza oko akwaziyo ukuba uyigcina.